Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Leenjii' Wayyaaneen barabaraan kennitu keessatti jechi 'DHIPHUMMAA' jedhu hafee hin beeku. Kanaafuu hiika jecha kana sirritti hubachuun feesisaasadha.
Leenjii' Wayyaaneen barabaraan kennitu keessatti jechi 'DHIPHUMMAA' jedhu hafee hin beeku. Kanaafuu hiika jecha kana sirritti hubachuun feesisaasadha.
Akka saaynsii siyaasaatitti sabboonummaa dhiphummaa bu'ura godhate jechuun
1) Sabni kiyya uumamaan saba kaanirra waan hundaa caala jedhee kan amanu; saboota biroo akka doofaa/ duubatti hafaa tti kan ofii akka qaroometti kan dhiheessu.
2) Qabeenyiifi aangoon hundi saba kiyyaaf mala kan jedhu
Akka saayinsii Wayyaanetitti namni tokko dhiphummaa qaba kan jedhamu yoo
1) Sabni kiyya maalinuu kan biraatii gadii miti; Aadaa, afaan,hawaasummaa, seenaa walumaagalatti eenyummaa isa boonsu malee kan qaanessu hin qabu jedhee yoo amane
2) Qe'eefi biyya isaa irratti sabni kiiya abbaadha. Qabeenya uumanan badhaafameefi kan hojjatee argate fayyadamuuf mirga qaba. Qabeenyaafi aangoo saboota biroo waliin waloon qaba akka gumaata isaatti qooddachuu qaba jedhee yoo amanee, saniifis falmateedha.
( Akka saaysnii siyaasaatti kun sabboonumma dimokraatawaadha)
Ani akka nama Oromoo irraa dhalateefi barnoota siyaasaa hamma tokko barateetti, ilma Oromoo tokko kan ilaalcha dhiphummaa saayinsii siyaasaatin kaayame san qabu argee hin beeku. Haala qabatamaa Itoophiyaa har'aatiin ilaalcha sabboonumaa dhiphummaa kan qabuufi hojittis hiikaa jir Wayyaanota qofa.
- Sabni isaanii jagnummaa hundaa oli akka qabutti miidiyaan qaanyii malee kan lallabaa jiru isaani
- Aangoo siyaasaa, kan waraanaafi akkasumas diinaggee biyyattii saba biraa hagabsanii harka saba isaanii qofatti kan galche Wayyaanota.
Kanaafuu dhiphoon Wayyaaneedha malee qabsaa'ota Oromooti miti.